थप १३४३ जनामा देखियो कोरोना – सडक मिडिया
गृह समाचार- राजनीति - अर्थ / वाणिज्य - छापाबाट IPL 2020 विश्व समाज/अपराध कला / साहित्य- मनोरञ्जन भिडियो- फोटोकथा विविध- प्रवास - खेलकुद - विचित्र सुदूरपश्चिम ENGLISH ⓟ
थप १३४३ जनामा देखियो कोरोना
सडक मिडिया December 3, 2020 0
पछल्लिो २४ घण्टामा देशभर थप १३४३ जनामा कोरोना भाइरस देखएिको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बितेको २४ घण्टामा ९ हजार २८९ जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा १३४३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । भने २ हजार १११ जना निको भएका छन् ।
यहिले कोरोनाभाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या १५ हजार ७६६ जना पूगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय परीक्षण घट्नुका साथै संक्रमित निको हुने दरसमेत बढेपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल कोरोना निको हुने दर ९२.७ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात बिहीबारसम्म कुल २ लाख ३७ हजार ५८९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा २ लाख २० हजार २७२ जना निको भएका छन् । यस्तै हालसम्म १५५१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बितेको २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ५६१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस्तै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, झापा र मोरङमा ५०० भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मनाङ र डोल्पामा भने संक्रमितको सङ्ख्या शून्य रहेको छ ।
कति जनाले पढें ? 211
Previous Post: चर्चित अभिनेता सन्नी देओललाई देखियो कोरोना
Next Post: आमाका गहना धरौटी राखेर पढेका तेज बहादुर करोडपति बन्दै….
मंगलसैन नगरपालिका द्वारा कमलबजारकाे पिसिआर प्रयोगशाला लाइ ५ लाख आर्थिक सहयोग
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नयाँदिल्लीमा
रहेनन कांग्रेस अछामका नेता देवकोटा
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत प्रस्थान
रुपान्तरण कक्षाका साथी शिक्षक हरुलाइ दस दिने तालीम सुरु
नेकपा विभाजन भएको छैन – ओली
अछामका मञ्जु सहित पाँच जना इन्टेग्रीटी आईकन–२०२० मा छनौट
बाबुले घरमा आगो लगाउँदा दुई छोराको मृ’त्यु
युट्युबद्वारा ट्रम्पको च्यानल निलम्बन
प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वाता लिएका चौधरीले भने : ‘सगरमाथामा भारतको दाबी हुनुपर्छ’ (भिडियाे)
सलमानले करियर बर्बाद गरेका विवेक बने अरबौँका मालिक…. 1,754 views
सुशान्तका अर्का साथिले…. 1,701 views
नायक अक्षयकुमारमाथि आइलाग्यो सङ्कट, फिल्म हिट भएर पनि यो कस्तो डर! 1,214 views
आइपिएलको नयाँ संस्करण ४ महिनापछि ,सन्दीपको सम्भावना कति? 724 views
चीनपछि पाकिस्तानले गर्यो आ’क्रमण, सेनासहित ११ भारतीयकाे मृ’त्यु 715 views
चर्चामा आलिया भट्टको गुलाबी स्वेटर, मूल्य सुनेर सबै चकित…. 390 views
पानीमुनि काजलको हनिमुन, एक रातको मूल्य नै ६० लाख (तस्वीरहरु) 375 views
मोटो रकम लिएर बिग ब्यास खेल्दै सन्दीप, टिमबारे भयो खुलासा 360 views
आलियासँगको सम्बन्ध बारे रनवीरकाे खुलासा…. 345 views
कृष्णा र गोविन्दाको झगडा बढ्दै, के हो विवादको कारण? 300 views
Copyright © 2021 सडक मिडिया.